Akụkọ - IFEX 2019 IN INDIA
Otu Feng erda sonyere na 2019 IFEX na India site na Jenụwarị 18 ruo 20. Ọ bụ nnukwu nzukọ nke ụlọ ọrụ ndị na-achọ ihe, Anyị matara ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na India.
Feng erda Group nwere ndị enyemaka abụọ: Tengzhou Feng Erda Metal Products Co., Ltd na Tengzhou Delifu Nkedo Ihe Co., Ltd. Fengerda isi ngwaahịa ekpuchi: Steel Shot, Steel Grit, Alloy egweri Steel Shot, igwe anaghị agba nchara Shot, Steel Cut Waya Shot ect. Delifu isi ngwaahịa mkpuchi: Ferrosilicon, Ferromanganese, Silicon Manganese Alloy, Ferrochrome, Ferromolybdenum Inoculants ect.Our ngwaahịa anyị na-eji na foundry ụlọ ọrụ, aerospace ụlọ ọrụ, ụgbọala ụlọ ọrụ, na-emepụta ụlọ ọrụ na na.
67th Indian Foundry Congress & ya na IFEX 2019, Ihe ngosi nke Expo nke India na 15th Asia Foundry Congress na 18-19-20 Jenụwarị, 2019 nke Delhi NCR Isi na India Expo Center na Mart, Greater Noida, NCR nke New Delhi na nnọchite nke Mpaghara Ugwu nke Institute of Indian Foundrymen.
Foundlọ ọrụ Indian Foundry nwere ọkwa nke onye nrụpụta nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa na ihe dịka nde tọn 10 kwa afọ.
Mgbakọ a ga-abụ ebe nzukọ maka ndị na-emepụta mgbatị, ndị na-ebubata ngwa ahịa, ndị na-azụ ahịa na ndị ọchụnta ego iji chọpụta ụzọ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ wee gosipụta ike ha. Ihe omume a n'onwe ya bụ ihe na-akpali akpali maka obodo Foundry na ndị ọhụụ ọhụrụ ka anyị na-atụ anya karịa ndị nnọchi anya debanyere aha 1500 na ndị ọbịa 10,000 oge a na-eme ka ọ bụrụ ogbako ụwa kachasị ukwuu maka ụlọ ọrụ foundry.
Nanị ngosi ngosi ahia na India, nke na-aghọ ngwa ngwa otu n'ime ụzọ mgbatị ndị dị mkpa na Asia - Cast India Expo ga-ahazi otu IFEX 2019 na 67 Indian Foundry Congress. Nke a bụ ezigbo ikpo okwu maka ntọala sitere na India dum iji gosipụta ikike ha na ikike ha maka ndị na-abịa n'akụkụ ụwa niile.
FENGERDA GROUP na-elekwasị anya na mma, na -emepụta akara, na-elekọta ndị ahịa ma na-eburu ibu ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ anabatala ya nke ọma.